Nwa m nwanyị chọrọ iyi etemeete, ọ dị oke n'oge? | Bezzia
Nke Torres | 12/01/2022 20:00 | Ndị nne ndụmọdụ
Oge ọ bụla nke ndụ ụmụaka dị iche, pụrụ iche na karịa ihe niile, siri ike. Usoro ntozu ụmụaka dị iche iche maka onye ọ bụla n'ime ha, Otú ọ dị, nsogbu na oge nrụgide na-abịara onye ọ bụla. Karịsịa mgbe ntorobịa na-abịaru nso, yana ọtụtụ ọrịa hormonal na mgbanwe n'àgwà ụmụaka, bụ́ nke na-eme ka ndị nne na nna mara nke ọma otú e si eme ya.
Ime mkpebi mgbe a bịara n'ihe gbasara ndị nọ n'afọ iri na ụma dị mgbagwoju anya, n'ihi na n'echiche ụfọdụ, ọ dị ka ndị toro eto, ma n'eziokwu, ha ka bụ ụmụaka. Ụmụaka ndị na-azụlite àgwà ha, mmasị ha na ihe omume ntụrụndụ ha nke taa bụ kwadoro ozi niile ha nwetara site na ịntanetị. Na nke ahụ bụ ebe ụmụ nwoke na-achọpụta ụwa dị ka ihe na-atọ ụtọ na arụmụka dị ka ụwa etemeete.
1 Nwa m nwanyị chọrọ iyi etemeete mana echere m na ọ bụ n'oge
1.1 Kụziere ya ka ọ na-eyi etemeete
Nwa m nwanyị chọrọ iyi etemeete mana echere m na ọ bụ n'oge
Ọtụtụ ụmụ agbọghọ na ọtụtụ ụmụ nwoke na-anụ ọkụ n’obi ime ihe ịchọ mma kemgbe ha bụ ụmụaka, na-enwekwa ọṅụ iṅomi ihe ndị okenye na-eme ma ọ bụ na-eji ejiji. Ịtinye etemeete bụ egwuregwu maka ha ma ọ bụrụhaala na ọ bụ ya, ọ bụghị nsogbu nye ndị nne na nna. Agbanyeghị, Gịnị na-eme ma nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma sị na ya chọrọ iyiri etemeete? Ihe ghọrọ okenye etemeete, ịpụ, ịga akwụkwọ ma ọ bụ nọrọ oge na enyi gị.
N'oge ahụ, ihe kachasị mma bụ na ị nwere mmuo ịjụ, iche na ọ ka dị obere ma kwupụta ya otú ahụ n'ihu ya. Ihe nwere ike ime onye ọ bụla n'ezie, n'agbanyeghị na ọ ka bụ mmejọ. N'ihi na mgbe nwa nwoke gwara gị ihe ọ chọrọ. na-eme ka ị hụ otú àgwà ya dị, meghere gị, na-eme ngosipụta ntụkwasị obi nke nwere ike imebi na-enweghị mgbagha.
Ya mere, mgbe ị na-enweta akụkọ dị otú ahụ, ihe mbụ na nke kachasị mkpa bụ ịnọgide na-achịkwa ma chee echiche nke ọma banyere otu esi eme ihe. Zenarị ikwu ihe ga-akpasu nwa agbọghọ ahụ iwe, agwala ya na ọ bụ nwa agbọghọ ma ọ bụ na nke a bụ maka ndị okenye, n’ihi na ọ ga-abụ na ihe ndị ọzọ ị ga-agwa ya na ọ bụghịzi nwa agbọghọ. gee ntị n'ọchịchọ ha, jụọ ya ka ọ gwa gị ụdị etemeete ọ chọrọGwa ya na ị ga-eche banyere ya ma mesoo ya oge ọzọ.
Kụziere ya ka ọ na-eyi etemeete
Ọ bụrụ na nwa gị nwanyị chọrọ itinye etemeete, ọ ga-eji ihu ọma gị ma ọ bụ na-enweghị ya. Ihe dị iche bụ na ọ bụrụ na o jiri nkwenye gị mee ya. ga-eme ya nke ọma, na ngwaahịa kwesịrị ekwesị na ịmụta nke nta nke nta ihe etemeete bụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ya na aghụghọ, ị ga-eji ngwaahịa dị ọnụ ala, agbaziri ma ọ bụ adịghị mma. Ị gaghị ama ka esi etinye ya, ma ọ bụ ka esi etemeete na-enyere gị aka ịma mma, n'ihi na nke ahụ bụ ihe ịchọ mma bụ ihe niile.
Oge ahụ kwesịrị ịbịa, n'ihi na ọ bụrụ na nwa gị nwanyị ekwupụta ọchịchọ ya itinye ihe ịchọ mma, n'oge na-adịghị anya ọ ga-abịa. Ya mere, nyere ya aka ịchọpụta ụwa ọchị nke etemeete, gịnị kpatara ya Ọ na-atọ ụtọ ma ị nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe nke. Were nwa gị nwanyị zụta ngwaahịa mbụ ya, n'ihi na ọ dị mkpa na ọ na-eji ihe ịchọ mma dabara adaba na afọ.
Họrọ ihe ole na ole bụ isi nke nwa gị nwanyị ga-enwe obi ụtọ, na-enweghị mkpa iji ụdị ngwaahịa ọ bụla. Ị nwere ike ịzụta moisturizer na agba ụfọdụ, ude dị oke mmiri nke nwere ihe nchebe anyanwụ nke ga-echebekwa akpụkpọ gị. lipstick na ụda pink, nke ị na-ahụ ụfọdụ agba na egbugbere ọnụ gị mana n'ụzọ aghụghọ. nwekwara ike jiri ụfọdụ ndò na ụda ụwa ma ọ bụ piich maka anya, ngwaahịa nke ga-ejekwa ozi inye agba na cheeks gị.
Site na isi ihe ndị a, nwa gị nwanyị nwere ike ịmalite akpa etemeete ya. Ị ga-enwekwa obi iru ala nke ịmara nke ahụ jiri ngwaahịa ha, nke dị mma, dabara adaba na agba ndị na-agaghị eme ka ọ yie agadi ma ọ bụ yi uwe. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-enwe obi ụtọ, ọ ga-adị ya ka a nụrụ ya, ghọta ya, na mgbe ọ chọrọ ịgwa gị okwu, a ga-emepụta obi ike dị oké ọnụ ahịa. Ihe bara uru n'ezie, ọ bụrụgodị na ọ dị mkpa ikwe ka nwa gị nwanyị tinye ihe ịchọ mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Ndị nne ndụmọdụ » Nwa m nwanyị chọrọ iyi etemeete, ọ dị oke n'oge?